Umqolomba weTiger - 52 m2 - *** Atout France
UArnaldo ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Indawo yam yokuhlala izolile kwidolophana eqhelekileyo, ekupheleni kwesiphelo, ifikeleleka lula. Yindlu endala enevault, ebuyiselwe kwindlu yosapho kumanqanaba ama-3. Ilungele izibini, ukuphumla okanye ukonwabela imisebenzi emininzi ekufutshane (ukutyibilika, ukukhwela intaba, ukukhwela ibhayisekile, nge-ferrata, ukukhwela umthi ...)
Indawo yokuhlala ifumaneka kumasango epaki ye-Vanoise, kwaye kuphela i-3 km ukusuka kwi-Orelle cable car (ukufikelela ngokuthe ngqo kwindawo ye-Val Thorens - iintlambo ezi-3).
Sisitali esidala esibuyiselweyo, esibizwa ngokuba yiGrotte du Tigre ngabazukulwana bam.
Isilingi ekhitshini ayidluli kwi-205 cm, ayikhuthazwa ukuba i-giants!
Ikwangumgangatho wekhitshi lam elibekwe kumgangatho omnye ngaphezulu, obangela ukungafezeki kodwa okwaneleyo ngokugqibeleleyo ukuvalelwa kwesandi. Ngokukodwa ukususela ekubeni i-insulation yegumbi elidibeneyo, igumbi lokuhlala kunye nelobusuku (kunye nebhedi ephindwe kabini ye-140 kunye ne-sofa) iphelele ekubeni yenziwe ngamatye (i-vaults).
Ungonwabela umoya woxolo we-cocooning kunye nesitovu somthi wepellet.
Ndihlala kumgangatho ophantsi wendlu kwaye njengomhlala phantsi osemncinci, ukuba andiyi kutyelela abantwana bam, ndiya kuvuya ukwabelana ngeengcebiso zam zokuhamba kakuhle, iindawo zokutyela, i-Italy engummelwane, kunye nolwazi lwam lommandla.
Ifunyanwa kwidolophu La Praz, indlu 7 kuphela km ukusuka kwisikhululo sikaloliwe Modane,-5 km ukusuka evenkileni kunye nesikhululo yepetroli, kufutshane Fréjus kwetonela ukungena Italy, kwaye ukusuka izikhululo ezininzi. Ski indawo ekufuphi (Valfréjus, La Norma, Aussois, Termignon, Val Cenis) kunye neekhilomitha ezi-3 kuphela ukusuka kwi-Orelle cable car ekhokelela kwindawo yeentlambo ezi-3 ...
Kubathandi beentaba ehlotyeni, indlu isemasangweni epaki yeVanoise, singasathethi ke eminye imisebenzi enokwenzeka, ukunyuka komthi, nge-ferrata, ukunyuka, iingxangxasi ukubona ...
Kwakhona kunokwenzeka ukuhamba ukusuka endlwini kwiindawo ezininzi zokuhamba.
Ukuba ndikho, ndingakuvuyela ukuthetha nabahambi. Ukuba andikho, ndiya kukuvuyela ukutshintshiselana ngeembono ngefowuni okanye ngomyalezo. Kuzo zombini ezi meko, ndiya kuxoxa ngaphambi kokuhlala ukunika ulwazi oluluncedo malunga nokufikelela kwindawo yokuhlala okanye ukuphendula imibuzo.
Ukuba ndikho, ndingakuvuyela ukuthetha nabahambi. Ukuba andikho, ndiya kukuvuyela ukutshintshiselana ngeembono ngefowuni okanye ngomyalezo. Kuzo zombini ezi meko, ndiya kuxoxa ngap…
Inombolo yomthetho: 84332855000010
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Saint-André